Impahla yemvula → Impahla esebenzayo • Imibala ye-P & M yekhompyuter
Ingubo yemvulaesikunika yona kwi Ivenkile yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu eziqinisekisiweyo ezihlangabezana nemilinganiselo engqongqo nemigangatho. Enye yeentlobo zeempahla ezithandwa kakhulu ekwindla nasebusika, ecaleni koboya obufudumeleyo kunye nezikipa ezimnandi.
Impahla yemvula eqinisekisiweyo
Impahla yemvula yahlulwe yangamacandelo aliqela ukulungiselela ukukhangela. I-assortment esiyibonisayo ingasetyenziswa kumashishini amaninzi. Ukhetho olukhulu kunye namaxabiso okhuphiswano ngokuqinisekileyo aya kukuvumela ukuba ufumane imveliso elungileyo.
Bona kwakhona: Ukufakelwa kombane kwikhompyutha- yintoni?
Uluhlu olubanzi lweemodeli zexesha ngalinye lonyaka kunye nomzi mveliso
Impahla yemvula ayinakubamba manzi enkosi kumaleko angaphakathi enzelwe ukugcina umsebenzisi ekhululekile kwaye kamnandi.
Sinikezela: iiseti, iidyasi, iibhatyi, iibhulukhwe, iiponchos. Eyona ndawo ithandwayo ziiseti eziququzelela ukhetho ngokukhupha isidingo sokukhetha izinto ezizezinye. Sinikezela uluhlu olubanzi lweesayizi, kunye nempahla yokunxiba yesayizi.
Iiseti zenziwe ngezinto eziguqukayo. Iiseti zibandakanya, phakathi kwabanye ukusuka kwi-dungarees kunye neebhatyi. Banikezela ngokhuseleko olupheleleyo kufuma - igcinwe kumaleko angaphandle, kwaye izinto ezongezelelekileyo ezinje ngeepokotho ezivaweyo zinceda ukukhusela izinto ezifihliweyo ekubeni zimanzi. Iisuti zemvula zivumela ukuhamba komoya simahla, okufunekayo ukunciphisa umngcipheko wokubila kakhulu.
Iingubo Iidyasi zinika ukhuseleko olufanelekileyo ekufumaneni umbulelo omanzi ekusebenziseni izinto ezikumgangatho ophezulu. Ukusetyenziswa kwezi zinto kuguqulela ekumeleleni okukhethekileyo kunye nokuchasana okuphezulu nomonakalo. Unikezelo lubandakanya iimodeli ezininzi-ukusuka ekubhityeni ukuya kwi-zloty ezimbalwa ukuya kubiza kakhulu kwaye komelele nge-cuffs, ukumelana ngakumbi nokusombuluka.
Iijekethi Iidyasi zemvula lisebe elinoluhlu lweemveliso ezivela kubavelisi abaphambili kwabo bantu bagxile kunyamezelo kunye nokusetyenziswa kakhulu. Iibhatyi zihlangabezana nemigangatho emininzi, ezinye iimodeli zixhotyiswe ngezinto ezibonisa ukuphucula ukubonakala kunye nokhuseleko. Ngakumbi ngokukodwa iimodeli eziguqukayo ezibonelela ngentuthuzelo epheleleyo kwiimeko zomsebenzi okhethekileyo womzimba.
Ukukhuselwa ngokuchasene nezinto zangaphandle
Ukusebenza kweempahla zemvula, oya kuthi uyifumane kwivenkile yethu, ikhusela kakhulu kwimvula okanye emoyeni. Uncedo lwayo olukhulu yintuthuzelo yokusetyenziswa, engayithinteli inkululeko yokuhamba. Ubungakanani obufanelekileyo buvumela intshukumo engenazingxaki ngexesha lomsebenzi okanye omnye umsebenzi. Kukwafanelekile ukunikela ingqalelo kuzinzo olufanelekileyo kunye nokumelana nomonakalo. Ukuveliswa kweempahla ziinkampani ezijolise ekuphunyezweni kweemfuno zempahla yokusebenza eqinisekisa ukuhamba komoya okufanelekileyo, oko ke kunciphisa umngcipheko wokubila. Siyabulela kwezi ndawo, ukunciphisa ukuthenga rhoqo iimpahla ezintsha kuncitshisiwe.
Imvula ye-allegroIingubo zemvula zeCastoramaiimpahla zemvula zedatathlonIimpahla zesithuthuthuImpahla engangenisi imvulaIimpahla zesithuthuthuiimpahla zokuzingela ezingangenelwa yimvulaiimpahla zemvula ezikhuselayoImpahla yegadi engangenisi mvulaiimpahla zemvulaimvula rainwearimpahla yabasetyhini yemvulaiimpahla zemvula zedatathloniimpahla zemvula zabantwanaiimpahla zemvula zabaqhubi bezithuthuthuiimpahla zabantwanaiimpahla zemvula zerabhaiimpahla zemvula zamahasheiimpahla zemvula uKoszalinimvula rain KrakowIimpahla zesithuthuthuIimpahla zesithuthuthuiimpahla zemvula zezithuthuthuImpahla yemvula yebhayisikileiimpahla zemvula zentlanziiimpahla zemvula zesithuthuthuiingubo zemvula proiimpahla zemvula ezisebenzayoI-allegro isebenza ngengubo yemvulaUmsebenzi wabasetyhini iimpahla zemvulaiimpahla zemvula zangaphandleukuloba iimpahla zemvulaiimpahla zemikhosi zomkhosiipvc yokunxibaiimpahla zomsebenzi ibhatyi yemvulaiimpahla ezisebenzayo idyasi yemvulaiimpahla zokusebenza ezingangenisi imvulaImpahla yemidlalo enqanda imvulaiimpahla zokuloba ezingangenelwa yimvulaiimpahla zemikhosi zomkhosizilungile iimpahla zemvulaIimpahla zesithuthuthuiimpahla zokusebenza ezingangenisi imvulasebenza iimpahla zemvula